Europe's Must See Places Of Worship | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa in Europe ee Fiiri goobaha cibaadada
Europe waxay hoy u tahay soo diyaariyeen ah ee taariikhda iyo dhaqanka naqshadaha breathtaking, inta badan kaas oo la qabtay iyada oo loo marayo qaarada Afrika ee ururinta badan goobaha cibaadada. Taasi waa sababta maanta, ayaan waxaan soo kaxaysatay 3 in aan ku taameysid isagoo buuxda waajib-arkaa, daboolaya dhismayaasha dunida-caan guud ahaan qaar ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Yurub.
1. St Peter Basilica ee, Vatican City
Waxay ku taallaa gudaha derbiyada quruun ugu yar dunida ee, Vatican City, St Peter ee Basilica shaki la'aan waa mid ka mid ah guulahaas ilbaxnimada ee ugu weyn ee naqshadaha iyo farshaxanka. Hadda a jiidashada waaweyn sawir 10 milyan oo soo booqda sannad ah, Qaab dhismeedka this cajiib ah ku jeedaa St Peter ee Square oo ku faantaa isku darka suudhka farshaxanka taariikhi ah, tiirar marmar ah oo qubbad uu halyeey humaag-damacsan loogu talagalay by Michelangelo (oo aad fuuli karaan si ay dusha sare ee, aad ku dhicin waa in ay qaataan ku saabsan 491 tallaabooyinka jidka!).
Inkasta oo ay tani tahay sida boos loo jecel yahay ka mid ah dalxiisayaasha, weli waxaa jira xeerka labiska adag dhaqan waa in aad ogaatid waxa ka hor booqashada. Waa inaad xirataa surwaal dheer (taasoo la micno ah ma gaab, iyadoo aan loo eegin sida ay u kulul in qorraxda Talyaani waa), haweenka ogola inay xirtaan daraftiisa muddo ka badan dhererka jilibka. Garbaha waa in sidoo kale la daboolo dhammaan jinsi waqtiyada oo dhan.
St Peter ee Basilica furan yahay maalin walba laga bilaabo 7 am-7pm bishii April in September iyo 7 am-6pm ka October in March. Entry waa lacag la'aan (in kastoo ay jiraan ajuurada oggolaanshaha ee qaybaha ticketed, sida St Peter ee Wasaaradda Maaliyadda iyo St Peter ee wadini), si kastaba ha ahaatee, in ay ogaadaan in safafka wuxuu noqon karaa mid dheer, ay sabab u tahay scanners Garoonka-style iyo ammaanka aad u leeyihiin in ay dhex maraan marka hore.
2. Masaajidka Sultan Ahmed (Masaajidka Blue The), Istanbul
Waxay ku taallaa magaalada transcontinental Turkiga, Istanbul, Masaajidka Sultan Axmed waxaa caadi loo yaqaan Masjidka Blue ayaa sababta oo ah gudaha buluug gaar ah. Dhisay by Ahmed urub Suldaanka waxaan kala 1609 iyo 1616, Qaab dhismeedka this cajiib ah u dhaqmo sida labada jiidashada dalxiiska waaweyn iyo meel firfircoon cibaadada, taasoo la micno ah masjidka uu xiran yahay si aan dadka cibaadaysanaya inta lagu guda jiro shanta salaadood maalin kasta – jeer ku tukanayeen noqon kartaa halkan hubiyaa ka hor inta aadan booqo.
Waxaa jira xeerka adag dharka in dhammaan martida waa in ay u hoggaansamaan ka hor intaadan gelin masaajidka. marka hore, kabaha waa in laga saaraa oo lagu meeleeyay bac cad oo caag ah ay bixiyaan lacag la'aan ah masaajid la'aan ah – markaas waxaad fursad u haysataa in uu ka tago kabaha aad god gurya ama qaado bac aad la. Marka ay timaado in aad dharka, dadku dooran dharka dabacsan iyo in la hubiyo lugaha lagu daboolay, waxyaabaha laga fogaado sida jaakadaha iyo gaab. Haweenku waa inay sidoo kale xiran dhar kaa dabacsan-suurawdo, iyada oo la hubinayo gacmahooda, lugaha, oo timaha lagu daboolay at dhibcood oo dhan. Taas macnaheedu waa in haweenka la filayaa in ay xirtaan xijaabka marka gudaha iyo, maadaama ay tani laga yaabaa in fikrad cusub oo badan oo soo booqda galbeedka ahayn Muslim, waxaan ku talinaynaa waxbarashada sida saxda ah xirtaan this lagama maarmaan dhar suubban ka hor inta aadan u safri.
Entry waa lacag la'aan (inkasta oo deeq u yar inay ka qayb qaataan daryeelka guud ee dhismaha waxaa lagu dhiirigelinayaa dul bixitaanka) iyo, mar gudaha, sawir la flash waa la ogol yahay, taasoo la micno ah in aad si xor ah u qaataan badan baddhamada gudaha cajiib ah masaajidka ee. Dabcan, shaki la'aan,, in sida Masaajidka Sultan Axmed weli waa meel firfircoon cibaadada, hubi in la sii xasilloon oo ixtiraam labada dhismaha iyo wax kasta oo dadka cibaadaysanaya inta lagu guda jiro booqashadaada.
3. The Sagrada Familia Basilica, Barcelona
La Sagrada Familia Basilica ayaa noqday durkin halyeey Isbaanish, inkastoo dhismaha wali waa uu dhismahoodu – inkastoo shaqo bilaabay 1882, waxa uu hadda aan filayaa in la dhameystiro ilaa 2026! Si kastaba ha ahaatee, kaniisadda semi-complete this Roman Catholic ayaa durbaba waxaa masterpiece ah naqshadda, taas oo ka dhigaysa jiidashada ah kama taagna waajib-arki martida ka ceshay.
Open inay kiniisadda iyo dadka soo booqda tan iyo qarnigii 19-ka, Sagrada Familia Basilica ayaa aad heshay 4.5 milyan oo soo booqda sannad kasta oo hadda u shaqeeya nidaam entry ticketed iyada oo sababtu tahay – kuwanu waa la heli karaa si online iibsadaan ilaa laba bilood ka hor taariikhda aad soo booqato. tigidhada Kuwani shaqeeyaan jeer soo galo go'an sida hab of yaraynta buux, si kastaba ha ahaatee, marka aad tahay qof aad gudaha ku jirtid si xor ah u qaataan inta aad jeclaan lahaa maxfalka gudaha cajiib ah. Waxaan ku talineynaa jidaynayey ugu yaraan 2 saacadood si fiican u qaadan in this yaab naqshadda. Kooxda martida ah oo raadinaya in ay ka qayb adeeg kaniisadda, mass waxaa lagu qabtay 9ka Sunday kasta oo 8pm Saturday kasta, waarta 1 saac oo la sameeyay dhowr luqadood.
La Sagrada Familia Basilica si rasmi ah fulisaa xeerka dharka caadiga ah ee kaniisadaha Roman Catholic, si kastaba ha ahaatee, tani ma u muuqdaan in ay la sida adag u dhaqan sida ay tahay at Ahmed Masjidka Sultan ama St Peter Basilica ee. qabka Kanu wuxuu yidhi, waxaa weli talo our in la raaco xeerka labiska this mar kasta oo ay suuragal tahay, taasoo la micno ah waa in aad ka saarto madax-gashiga dul entry, xirtaan dharka jirka sare ku habboon oo daboolaysa garbihiinna, back, oo dhexda iyo legwear Duugga in daboolida hoos dhigay bowdadii.
Europe waxay hoy u tahay dad badan oo meelo qurux badan cibaadada in si dhab ah encapsulate xoogga mushkilado ee naqshadaha iyo waxyoonay diinta. Si aad u aragto dhibco kuwan gacan koowaad, safri qaaradda tareen iyo ballansan leh Save A tareenka to leave no stone upturned across Europe’s many sights and attractions.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “3 Of Places waa-Fiiri Yurub ee caabudina” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa our page la link kor ku xusan ama isticmaal link embed.ly.
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa TR si FR ama de iyo luqado badan oo aad dooratay.
LaSagradaFamilia Mosque tareen safarka traveltips vaticancity worship
Anigu waxaan ahay abuura macaan isla markaana ku faano islaamka islaamka waqtigayga firaaqada ah waxaan qoro nuxurka shaqadayduna waa samaynta abayas, xijaab iyo dhar islaami ah oo aad u yar oo dumarka loogu talagay. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir